Accueil > Gazetin'ny nosy > Paika ady famoronana asa
Mampiroborobo ny tsy an’asa
Isan’ny itarafana ny fahantran’ny firenena iray ny fahamaroan’ny tsy an’asa ao aminy. Rehefa maro ny tsy an’asa dia any amin’ny sehatry ny mpitsikaraka marolafy na « secteur informel » no mihazakazaka mitady vahaolana mba hahitana vola ny maro. Dia taratra amin’izany ny tontolon’ny toekaren’ilay firenena. Hita eto Madagasikara izany satria dia miroborobo tsy hay tohaina ny sehatry ny « mpitsikaraka marolafy », ary marefo mihitsy ny toekarem-pirenena satria tsy ampy ny sehatra ananganana rafitr’asa mifanandrify amin’ny lenta maneran-tany na « secteur formel ». Marina fa betsaka ny vola mihodina ao anatin’ireny sehatry ny « mpitsikaraka marolafy » ireny fa tsy dia mitondra inona ho an’ny firenena. Zara raha ahitan’ny mpitsikaraka marolafy izay harapaka mba tsy handry fotsy izany.
Ka matetika, resahina sy anaovana fikaonan-doha na atrikasa mihitsy ity tontolon’ny famoronana asa ity mba ho vahaolana iray hoenti-manarina ny ara-tsosialy eto Madagasikara. Raha resahina sy arafitra eo ambony latabatra ilay resaka dia toa ao anatin’ny telo volana dia hiakatra hatramin’ny 30% ny tahan’ny famoronana asa. Tsy vitan’ny resaka ambony latabatra io fa aoka hijery ny fiainana andavanandron’ny malagasy ianareo mpitondra alohan’ny famariparitanareo ny paika ady hamoronana asa.
Tsy hoe ambany na natokana ho an’ny tsy nahita fianarana ny fambolena sy fiompiana fa io sehatra io ihany dia efa ahafahana mampidina ny tahan’ny tsy an’asa eto Madagasikara raha misy ny finiavana politikan’ny mpitondra hanosika sy hampiroborobo ny tontolom-pambolena sy fiompiana. Hidinika ny fampivainganana izany fahavitan-tena ara-tsakafo izany izao ny fitondram-panjakana afaka roatokombolana eo. Antenaina fa hametraka paika ady ho fanoitran’ny famoronana asa io, ka tsy asa famokarana sakafo ho eo ambany fanandevozan’ny vahiny fa asa famokaran-tsakafo andraisan’ny tantsaha malagasy anjara mavitrika amin-kerim-po, ary tena ahatsapany fa tompon-draharaha izy vahoaka tantsaha fa tsy mpiasa.
Raha vao ny vahiny no ianteherana dia ny fampidirana ny politika mahomby any aminy no tereny hataontsika. Tsy inona io fa ny fampiasana fitaovana sy milina ary haitao ara-teknôlôjia… izay mampiroborobo ny tsy an’asa.